San Htun's Diary: မကာအိုသွား တောလား
ပျော်စရာကြီး...း)).. စတိတ်ကနေ မခွာလေနဲ့... :D.. ဟိုတစ်ခါပြောတဲ့ ထိုင်ဝမ်ကျောင်းသား.. ဒီကဗီဇာပြန်လာတိုးတာ.. စတိတ်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ ဗီဇာကျဖို့ကို အတော်ပြန်စောင့်လိုက်ရတာ... မြန်မာဆို မလွယ်ရေးချ မလွယ်...
မှ ကိုယ်ရ တာ ကျွန်တော်နဲ့တူသဗျ...၊အဲ့လိုကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့
ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ တိုတို၊ဖိုးဒီ တောင်ဘယ်တော့မှ
ရုံးက ဘော်ဒါတွေက တကယ် စိတ်ရင်းကောင်းပြီး ခင်ဖို့ ကောင်း၊ ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်...:)
မက္ကာအို အလွမ်းပြေလေး ကြည့်သွားတယ် စန်းစန်းရေ။ တီတင့်ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က လုပ်ငန်းရှင်က မက္ကာအိုကဆိုတော့ မကြာခနရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။
အင်းးး.. မကာအိုတော့ ပုံတွေထဲကနေ
ကိုယ့်ဘာသာဆိုလို့ကတော့ မြန်မာမှာတောင် နှံ့အောင်မရောက်ဖူးသေးဘူး.. ဟီးးးး။။
ကဲ ဘာပဲပြောပြောစန်းကျေးဇူးနဲ့ မကာအိုကိုရောက်ဖူးသွားပီး)
စန်းထွန်းရေ အမ ခရစ်စမတ်မှာ ဟောင်ကောင် သွားရမှာ အဲဒီက ရာသီဥတု အခြေအနေ သိချင်ပါတယ် ။ အနွေးထည် လိုမလို ကြိုစီစဉ်ရအောင်လို့လေ ။
စန်းထွန်းရေးတာလေးတွေ ဗဟုသုတ လဲရ ချစ်စရာ ပျော်စရာလဲကောင်းမို့ အမြဲလာဖတ်ပေမဲ့ ကွန်မန့်တော့မရေးဖြစ်ဘူးရယ် ....
မကာအိုကို စန်းထွန်းနဲ့အတူ လိုက်လည်တာ နောက်ဆုံးတော့ မောလွန်းလို့ ဟိုတယ်က ကုတင်ကြီးပေါ် အိပ်ပျော်သွားေ၇ာ..း)
ကုတင်က အိပ်ချင်စရာဖြစ်နေတာ့ စိတ်ထဲဒါလေးဘဲစဉ်းစားနေတာ..
ဝအောင်စားပြီး အိပ်ပစ်လိုက်လို့ကတော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ စည်းစိမ်ဘဲး)
ခရီးက ပျော်စရာကြီးရယ်.. အားကျတယ်
လောင်းကစားကံမပါတာတော့ တူပါ့ဗျား...တစ်ခုခုရမယ့် ကံစမ်းမဲများနှိုက်ရရင် တစ်ခါမှကို ပေါက်တယ်မရှိဘူး...တစ်ခုခု လုပ်ရမယ့် ကံဆိုးမဲများဖောက်လို့ကတော့ ပထမဆုံးနှိုက်...ပထမဆုံးပေါက်တာချည်းပဲ...
ကိုင်း မကာအိုတော့ ရောက်ဖူးပြီဗျား...နောက်ဆက်တွဲတွေစောင့်ဖတ်ဦးမှ...
မကာအိုသူတွေချောတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် ဓာတ်ပုံလေးတော့ တင်စေ့ချင်တယ်ကွယ်...း)
ပရိုလက်ရာပေါက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ရုံးက အင်ဒိုနီးရှားမလေး Ira ရိုက်ထားကို ကော်ပီထားတာ..သူ့ ကင်မရာက Canon EOS ဆိုတော့ ကြည်ပြီးတောက်နေတာပဲ..ပြီးတော့ သူက လူထက် ရူခင်းပုံတွေ ရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတယ်..မွေ့ ယာကြီးကိုလည်း သူရိုက်ထားတာ..ခရီးသွားနေတုန်းကတော့ ပင်ပန်းလို့ ဆိုပြီး အိပ်ငိုက်၊ အဲ သူများရိုက်ရင်တော့ ပြေးပြီး အတင်းရိုက်ခိုင်းတာ..ခရီးက ပြန်ရောက်ရင် သူများရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကော်ပီကူးတာ..တီတင့်နဲ့ များ ကွာပါ့..
၇ာဟန်၊ ကိုငြိမ်းနိုင်၊ နေဝသန်၊ ကြောင်မျိူး၊ ဓာတ်မီးတလက် အဲလေ အလင်းတစက်၊ တဂျင်းမီး ကိုကိုမောင်၊ မောင်မောင်(မြစ်ဆုံ) တို့ကြည့်ချင်မှန်းသိလို့ မကာအိုသူတွေပုံကို တမင်တကာ မရိုက်ခဲ့တာ..မကာအိုသားလေးတွေတော့ ရိုက်ခဲ့တယ်..ဟဲ ဟဲ..
စန်းထွန်းတို့ အဖွဲ့ကလည်း ခင်မင်ချင်စရာ...
ကျွန်တော် စန်းထွန်း ဆိုလို. အစ်ကို ထင်နေတာ အစ်မ တစ်ယောက်ဆိုတာ ခုမှ သိတယ်--- :P
အဲ.လိုဘဲ မောင်မောင်က လွဲနေရမှကို ---
နိုင်ငံပေါင်းစုံကကျောင်းသားတွေနဲ. ကျောင်းတက်ရတာ ပျော်ဖို.အရမ်းကောင်းတယ်နော်။
ပျော်စရာကြိးဘဲနော် မကာအို မရောက်ဖူးလို့ဓါတ်ပုံတင် ပေးတာ ကျေးဇူး